iziphonso zamakhandlela 8675
iziphonso zamakhandlela Ngiphonsa iziphonso zami ngosizo lwamandla okhokho bami ngokomoya, ukuphonsa kwami ​​iziphonso kwenziwa ngendlela eyingqayizivele ukusiza izinkinga zakho. Kuyisiphetho sami ukunikela ngeseluleko sami semilingo nesiqondiso esingokomoya sokusebenzela abanye. Impilo luhambo futhi ngamunye wethu ufanelwe ukujabulela ukuhamba.
Yebo kuzoba khona ukuphakama nokwehla kulolu hambo kepha yindlela esibhekana ngayo nabaphansi nokuthi sizinqoba kanjani izithiyo ezingezinhle ezichaza ukuthi singobani futhi zichaze indlela yethu nesiphetho sethu. Ngingakusiza unqobe ubuhlungu benhliziyo yakho futhi ngikufundise ukuthi uzizwe kanjani futhi ukhule kanjani futhi ube nothando.iziphonso zamakhandlela.
Mangala ngoba ekugcineni uthole umuntu ongakusiza empeleni ngaphandle kwezingcezwana! Zama okukodwa okuhle kakhulu! Cabanga okuhle futhi ushayele namuhla ikusasa elingcono! Kumele ngikuxwayise – ngisebenzisa kuphela amandla ami okomoya ngokuthembeka okuphelele futhi kwesinye isikhathi ungahle ungathandi engikushoyo kodwa ngiyathembisa ukuthi kuzozuzisa wena nokuthi indawo yakho yonke ibe nethemba futhi iphumelele. iziphonso zamakhandlela
PreviousUkunqoba Amacala AseNkantolo
Nextlove spells witchcraft